"Muddo Korodhsi Dalkan Kama Dhici Karo" - Madaxweynaha Puntland Oo Digniin U Diray Farmaajo - Jigjigaonline
HomeSomalida“Muddo Korodhsi Dalkan Kama Dhici Karo” – Madaxweynaha Puntland Oo Digniin U Diray Farmaajo
Garoowe (JigjigaOnline) – Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland, Saciid Cabdullaahi Dani oo wareysi gaar ah siiyay laanta afsoomalaiga ee BBC-da ayaa waxaa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ay kamid yihiin mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka 2020 iyo doorashadii dhawaan ka dhacday maamulka Jubaland ee uu buuqa ka dhashay.
Madaxweyne Deni ayaa waxaa kale oo uu ka hadlay warar sheegayay in Dowladda federal ee Soomaaliya laga yaaba inay damacsan tahay muddo korodhsi, arrintaas oo horay loogu eedeeyay dowladda, balse ay benisay in uu jiro qorsha noocaas ah.
“Mid Soomaalida way isku raacsan tahay, wax la yiraahdo muddo korodhsi dalkan kama dhici karto, dalkan wuxuu ku jira geedi socod siyaasadeed, loo horseeday in hay’adihiisu ay caga dhigtaan, wax Soomaali ku heshiisan tahay waxaa ka jira ilaa iyo hadda oo u hirgalay in doorashada ay xiligeeda ku dhacdo”, ayuu raaciyay.
Guddiga madaxabanaan ee doorashooyinka Soomaaliya oo ay guddoomiye ka tahay Xaliimo Yarey, oo horaantii sanadkan ka hadashay suurtagalnimada ah in doorasho shacabka ay ka qeybqaataan ay ka dhacdo dalka ayaa waxay sheegtay in taas ay ka shaqeynayaan.
“Doorashooyinka waxay ka dhacayaan deegaan kasta oo amni ahaan iyo siyaasad ahaan u suurtagelinaya in guddiga uu doorasho ka qabto, ” ayay tiri Xaliimo Yarey.
Arrinta ay ka dhawaajisya gudoomiyaha guddiga ayaan la garaneyn sida ay u dhaqan geli karto, iyadoo qorshahaas uu u baahan yahay in marka hore la ogaadoo deegaan barlamaaneedyada, diiwaangelinta codbixiyeyaasha iyo qabsoomidda doorasho xor iyo xalaal, maadaama ammaanka uu saldhig u yahay doorasho walba oo k dhacda Soomalaiya, Al shabaab na ay maamulaan deegaano badan oo ay tahay in ay doorasho ka dhacdo.
Dhamesytirka dastuurka federaalka oo wali qabya ah iyo sidookale maqnaashaha Somaliland oo aanan ilaa iyo iminka go’aan laga gaarin ayaa kala cadeyn sida ay doorasho uga dhici karto, waxaana dadka qaar ay qabana in xiligan ay adag tahay in Soomalaiya ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah, marka la eego caqabadaha ku gedaaman.
Arrimaha Jubaland oo dhawaan ay doorasho ka dhacday ayuu sidoo kale soo hadal qaaday, wuxuuna ku adkeystay go’aankii maamulkiisa ee ahaa inay aqoonsan yihiin doorashadii Axmed Madobe.
“Mowqifka Puntland wuu caddaa, Doorashada Jubaland na si dhaw ayaan ula soconay, si lamid ah kuwa kale, doorashadii Jubaland ka dhacday mowqifkeena runtii wuu cadaa, waxaan aaminsan yahay in doorashadaas si nabadgelyo ah oo hufan ay ku dhacday, “, ayuu ku daray.
Waxaa kale oo uu sheegay in dhamaan waxyaabihii ay tabanayen dhinacada siyaasadda ee Jubaland iyo beesha caalamka ay kala hadleen maamulka, xaln laga gaaray.
Dowladda Soomalaiya ayaa ku gacanseyrtay doorashada Axmed Madobe sheegtayna inaysan aqoonsanayn nidaamka iyo natiijada doorashada.
Itoobiya: Mayor Magaalo Oo Gurigiisa Lagu Dhex Dilay